Guddiga Senat-ka Baarlamaanka Kenya Oo diyaarinaya in la xanibo soo dejinta Sonkorta iyo Bariiska – Madal Furan
Hoy > Warka > Guddiga Senat-ka Baarlamaanka Kenya Oo diyaarinaya in la xanibo soo dejinta Sonkorta iyo Bariiska
Guddiga Senat-ka Baarlamaanka Kenya Oo diyaarinaya in la xanibo soo dejinta Sonkorta iyo Bariiska
Editor September 19, 2018 Warka 0
Nayroobi (Madal Furan) – Guddiga Senatka ee dhinaca Ganacsiga ee dalka Kenya ayaa soo bandhigay qorshe ah in dowladda dalka Kenya ay dalkeeda kaga mamnuucdo soo dejinta cuntooyinka laga soo waarido waddanka dibadiisa lana dhiiri geliyo in la isticmaalo cuntooyinka waddanka gudihiisa laga soo saaro si looga badbaadiyo shacabka inay quutaan cuntooyin aan wax badbaado ah laheyn.
Gudoomiyaha guddiga senator Charles Kibiru ayaa su’aalay dowladda dalka sababta ay u ogolaatay soo dejinta bariiska iyo sonkorta ee ay su’aashu ka taagan tahay xilli beeraleyda dalku ay soo saarayaan wax soo saar midkaas la mid ah.
Dowladda dalka ayaa dhankeeda soo magacowday koox isku dhaf ah oo ka kala socada shirkado ganacsi oo kale duwan si ay u wajahaan waxyaalaha mamnuuca ah dalka ama khatarta ku ah wax soo saarka dalka laga helo.
Kooxda isku dhafka ah ayaa geli doona meelaha lagu arko in ay yaalaan sonkorta sida sharci darrada ah lagu soo galinayo dalka. Waxa ay sheegeen in sonkorta qaarkeed ay tahay mid sumeysan islamarkaasina Bariisku yahay mid dhacay.
Turkiga oo daaha ka feydaya faahfaahinta ay ka heleen dilkii Weriye Khashoggi
Xog Dahsoon: Ururkii Ikhaawaan Muslimiinka Soomaaliya ayaa wada qorshe lagu kala leexinayo siyaasadda dowladda iyo xukunka Diinta Islaamka.